Fanabeazana momba ny sakafo - Bankin'ny Sakafo any Galveston County
Ny Galveston County Food Bank dia miara-miasa amin'ny fikambanana manerana ny fiarahamoninay mba hanampy amin'ny fampitaovana ny fianakavianay ireo loharanon-karena ilain'izy ireo handrahoana sakafo mahavelona, ​​mety sy azo antoka.
Manorata kilasy fanabeazana momba ny sakafo
Fiaraha-miasa Pantry salama
Tetikasa Senior Hunger
Fivarotana tantsaha sy fivarotana zoro
Makà bilaogy, jereo ny loharano, zarao ny fomba fahandro ary bebe kokoa amin'ny alàlan'ity fampiharana Feeding America mahafinaritra ity
Fifandraisana amin'ny mpiasa
Mpitantana ny sakafo
Mpanabe momba ny sakafo
Fandaharana Senior Hunger Programs
Mpanampy amin'ny sakafo
Fandaharana pantry mahasalama
Kitiho ny famakiana bebe kokoa amin'ny iray amin'ireo fomba fahandro hanokatra resipeo feno sy ny zava-misy momba ny sakafo.
Muffins dibera voanjo
Voanjo totozy Muffins muffin tinmixing lovia 1 1/4 kaopy dibera voanjo 1 1/4 kaopy lafarinina zava-kendrena rehetra 3/4 kaopy mihodina o3 lafarinina, voanemba, siramamy volontsôkôlà, vovo-mofo ary sira anaty vilia fandrahoana
Continue Reading Muffins dibera voanjo
Veggie Tacos 1 afaka tsaramaso mainty ambany sodium1 afaka katsaram-bary feno (tsy asiana siramamy) dipoà lakolosy 1 avokado manontolo (tsy voatery) 1/1 tongolo mena 2/1 kapoaka ranom-boasarimakirana 4 sotro tantely 2 tsp vovoka sakay tsaramaso mainty ary kobanina. Katsaka tatatra. Afangaroy ao anaty lovia fangaro mifangaro lehibe
Salady spinach Strawberry
Voalobia epinily Strawberry 6 kaopy epinara vaovao 2 kaopy frezy (voadidy) 1/2 kapoaka voa na karazan-tsafidy ((amandy, kenanasy, voa voatavo, pecan)) 1/4 kaopy tongolo mena (voatetika) 1/2 kaopy menaka oliva 1/4 kaopy vinaingitra balsamasy sira sy dipoavatra mba hanandrana Sasao epinara vaovao ary apetraho anaty vilia lehibe, frezy voanjo, tongolo mena
Continue Reading Salady spinach Strawberry
Salady Pasta Chicken Pasta
Pesto Chicken Pasta Salady vilany fandrahoan-tsakafo 1 cano ao anaty rano 1/2 tongolo 1/2 saosy pesto kapoaka 1 voatabia voatabia na voatabia serizy 1/4 kapoaka menaka oliva 1 pkg pisa safidinao (spaghetti, makaroni, fatorana tsipika) fromazy Parmesan ho an'ny garnish Pasta Cook araka ny fonosina ary atsofohy ao anaty lovia lehibe
Continue Reading Salady Pasta Chicken Pasta
Bilaogy fanabeazana momba ny sakafo
Biyun Qu no anarako, ary mpitaiza sakafo mampihetsi-po aho izay mihodina ao amin'ny Galveston County Food Bank. Ao amin'ny Banky Sakafo dia manana tetik'asa efa niasa samihafa izahay, ary afaka mamoaka hevitra vaovao aza ianao ary mampihatra azy ireo! Nandritra ny efatra andro niasako teto, dia nanampy tamin'ny…
Continue Reading Blog Intern: Biyun Qu
Vao haingana izahay no afaka nanamboatra zaridaina ahitra kely teo amin'ny tsenan'ny sakafo. Ankafizo azafady ireo infografika noforoninay momba ny zava-maniry nambolenay ary manantena izahay fa afaka hizara aminareo tsy ho ela!
Inona avy ireo "sakafo voahodina"?
Ny teny hoe "sakafo voahodina" dia natsipy saika tao amin'ny lahatsoratra momba ny fahasalamana sy bilaogin-tsakafo rehetra mety ho hitanao. Tsy lainga fa ny ankamaroan'ny sakafo hita amin'ny fivarotana enta-mavesatra ankehitriny dia sakafo voahodina. Fa inona avy ireo? Ahoana no ahafantarantsika hoe iza amin'ireo no mety ho lanina ary iza no tsy mahasalama? Ity misy…
Continue Reading Inona avy ireo "sakafo voahodina"?
Fitsipika momba ny fahasalamana ho an'ny zokiolona
Mifantoka betsaka amin'ny fahasalamana ho an'ny ankizy izahay, saingy tsy dia misy resaka be loatra momba ny fahasalamana ho an'ireo zokiolona. Ity lohahevitra ity dia manan-danja mitovy amin'ny fahasalamana ho an'ny ankizy. Ny tsara indrindra dia ny hifantoka amin'ny fahasalamana amin'ny vanim-potoana rehetra iainantsika fa ny tena mora tohina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny ankizy sy ny zokiolona. …
Continue Reading Fitsipika momba ny fahasalamana ho an'ny zokiolona
Torolàlana momba ny fahasalamana ho an'ny ankizy
Raha mahatsapa fanamby ianao amin'ny fieritreretana sakafo ara-pahasalamana ho an'ny zanakao dia tsy irery ianao. Ity dia teboka iray mampihetsi-po an'ireo ray aman-dreny be dia be fa andao handray izany dingana izany! Azonao atao ny manomboka amin'ny dingana iray mankany amin'ny lalana tsara ary raha izany rehetra izany no mahomby amin'ny fianakavianao dia tsy…
Continue Reading Torolàlana momba ny fahasalamana ho an'ny ankizy
Sakafo ara-pahasalamana eny an-dalana
Sakafo ara-pahasalamana eny am-pandehanana Iray amin'ireo fitarainana lehibe henontsika momba ny diany mihinana ny tsy fahasalamana; mety marina izany, fa misy safidy salama any! Raha eny ivelany sy any ivelany ianao nefa tsy misy sakafo maivana mialoha, dia misy safidy tsara ankoatry ny salady fotsiny. Ireto misy mora…
Continue Reading Sakafo ara-pahasalamana eny an-dalana
Fahazoana tombony betsaka amin'ny vokatrao amin'ny lohataona
Ny lohataona dia eny amin'ny rivotra, ary fantatrao ny dikan'izany, voankazo sy legioma vaovao! Raha manana teti-bola ianao dia izao no fotoana hividianana ny vokatra azo avy amin'ny vanim-potoana. Mety ho tsikaritrareo fa ireo entana vokatra ireo dia mora kokoa amin'ny fotoanan'ny lohataona: voaroy, blackberry, manga, paiso ary plum; voatabia, katsaka, lettuces, voatavo, karaoty & maro hafa! Eto …
Continue Reading Fahazoana tombony betsaka amin'ny vokatrao amin'ny lohataona
Mividy "Salama" amin'ny tetibola SNAP
Tamin'ny taona 2017, nitantara ny The USDA fa ny fividianana indroa roa an'ny mpampiasa SNAP dia ny ronono sy zava-pisotro mahery. Ilay tatitra dia nampidirina ihany koa fa 0.40 $ isaky ny dolara SNAP dia lasa mankany amin'ny voankazo, legioma, mofo, ronono ary atody. 0.40 dolara hafa kosa no tonga tamin'ny sakafo fonosana, serealy, ronono, vary ary tsaramaso. Ny $ 0.20 ambiny dia mankany amin'ny zava-pisotro mahery,…
Continue Reading Mividy "Salama" amin'ny tetibola SNAP
Herinandron'ny tsy fanjarian-tsakafo
Miara-miasa amin'ny UTMB izahay amin'ity herinandro ity ary mankalaza ny herinandro tsy fanjarian-tsakafo. Inona marina ny tsy fanjarian-tsakafo? Milaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy fahampiana, fihoaram-pefy na tsy fitoviana amin'ny fihinanana angovo sy / na otrikaina. ” Mety ho tsy fanjarian-tsakafo na fanjarian-tsakafo tafahoatra. Rehefa mieritreritra tsy fanjarian-tsakafo ny olona iray dia mazàna no mieritreritra ankizy torana, fa izahay kosa…
Continue Reading Herinandron'ny tsy fanjarian-tsakafo
Volana nasionaly momba ny sakafo
Volana Nasionalin'ny sakafo ara-pirenena ny volana martsa ary mankalaza isika! Faly be izahay fa eto ianao! Iray volana natokana hijerena indray ny Volana Nasionalin'ny fanjarian-tsakafo ary tadidio hoe maninona no zava-dehibe ho antsika ny fisafidianana sakafo mahasalama sy mamorona fomba fiaina mavitrika. Monina ao amin'ny firenena ahafahantsika mividy salama sy vaovao…
Continue Reading Volana nasionaly momba ny sakafo
Ny tsara, ny ratsy, ny mahantra amin'ny siramamy
Fetin'ny mpifankatia! Andro iray feno vatomamy sy entana voaendy ary faniriana hihinana azy ao am-ponao! Ny tiako holazaina dia hoe maninona? Nivarotra azy io ho zavatra hahatonga antsika hahatsapa ho mahafinaritra sy tsara ho antsika, sa tsy izany? Andao hiroboka lalindalina kokoa ary hijery hoe inona ireo entana…
Continue Reading Ny tsara, ny ratsy, ny mahantra amin'ny siramamy
Sakafo ara-bola amin'ny teti-bola
Ny sakafo mahavelona tsara dia ampahany lehibe amin'ny fananana fiainana salama sy mahasambatra. Ny sakafo ara-tsakafo tsara dia ahafahanao manana vatana salama, izay ahafahanao: manao azy io hiasa isan'andro, milalao bebe kokoa amin'ny zanakao, manao fanatanjahan-tena ary matory tsara kokoa. Ny sakafo mahavelona tsara dia manomboka amin'ny fototra mafy orina amin'ny sakafonao. Sarotra ny…
Continue Reading Sakafo ara-bola amin'ny teti-bola
Soa ihany izahay niantso an'i Galveston County Home
Ny tena mampiavaka ny faritaninay dia ny mponina ao aminy: malala-tanana, tsara fanahy ary vonona hanampy ny mpiara-monina aminy hatrany. Io no antony itiavantsika miaina eto. Mampalahelo fa maro amin'ireo mpifanila vodirindrina amintsika eto Galveston no miady mafy mitady sakafo sahaza ho an'ny tenany sy ny fianakaviany. Ao amin'ny Bankin'ny Sakafo any Galveston County, ny tanjonay dia ny hanome ny tena ilaina…
Continue Reading Soa ihany izahay niantso an'i Galveston County Home
Sakafo ara-tsakafo amin'ny fiteniko
Mira horonan-tsary en español: